ठेक्कामा १२ अर्बको चलखेल पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा संकटको संकेत ! «
ठेक्कामा १२ अर्बको चलखेल पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा संकटको संकेत !
Published : 26 July, 2020 3:52 pm
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा संकटको संकेत देखिएको छ । आवश्यक समन्वय र तयारीविनै रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएपछि यो आयोजनामा उल्झनको संकेत देखिएको हो । रेलमार्गको ठेक्कासम्बन्धी यो विवाद सरकार, संसदीय समिति हुँदै सार्वजनिक असन्तुष्टिसम्म बदलिएको छ । असन्तुष्ट पक्षहरु अब अदालतमै जाने तयारी गरिरहेका छन् । तर समस्या निम्तिन दिन नहुने सरकार भने यतिबेला समस्यालाई आफलै कुरेर बसिरहेको जस्तो देखिन्छ । रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया पूर्वाग्रही र अनुचित भएको भन्दै बिहीबार १४ वटा निर्माण व्यवसायीले संगठित रुपमै सार्वजनिक असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ती निर्माण व्यवसायीले रेल विभागले आह्वान गरेको ठेक्कामा सीमित निर्माण व्यवसायी मात्रै सहभागी हुन पाउने प्रावधान राखिएको जिकिर गरे । त्यसो त यसअघि ती व्यवसायीहरुले रेल विभाग, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका साथै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा समेत यसबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् । साथै, उनीहरुले यसबारे सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी समेत दिइसकेका छन् । समितिले उक्त उजुरीबारे अहिले अध्ययन गरिरहेको छ । यतिमात्रै होइन उनीहरुले यही विषयलाई लिएर अदालत जाने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
प्रक्रिया नपुगी गरिएको ठेक्का रोक्न अदालतले स्टेअर्डर दियो भने अनिश्चितकालसम्मको लागि यो ठेक्का रोकिने सम्भावना छ ।
नेम्वाङले गत पुसमै डेढ महिनाभित्र जनकपूर जयनगर रेलमार्ग सञ्चालन हुने बताएका थिए । उनको भनाई अनुसार माघ मध्यसम्ममा त्यो रेल सञ्चालनमा आइसक्नुपथ्र्यो । तर, अहिलेसम्म पनि त्यो सञ्चालन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय रेलवेको ठेक्कामा देखिएको हतारोले उनीप्रति समेत आशंका गर्न थालेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, सरकारले यातायात खुला गरे पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्न देखाएको उदासिनताका कारण यातायात व्यवसायीहरु समेत उनीप्रति असन्तुष्ट छन् । नेम्वाङले ‘गाडी चलाए चलाउ, नचलाए नचलाउ’ भन्ने व्यवहारप्रति यातायात व्यवसायीको गुनासो छ ।